အောင်မြင်သော အဖွဲ့ကောင်းတခုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ? | Mycanvas
အောင်မြင်သော အဖွဲ့ကောင်းတခုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ?
လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိ လူအများစု ကိုတွဲဖက်ရန်ရှာဖွေခြင်းထက် ပိုမိုသည့် အကြောင်းအရာ တခုမှာ ရလဒ်ကောင်း များကို အစဥ် သယ်ဆောင်ပေးသည့် ကောင်းမွန် သည့် အဖွဲ့ တခုအဖြစ် တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို ရုံးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၅၀၀ မှ ဦးဆောင်နေသည့် ခေါင်းဆောင်များကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ ဖြေကြားထားသည်။
ကျစ်လစ်အားကောင်းသည့် အဖွဲ့တခုအဖြစ် မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည် အရာ အားလုံးကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန် မြင့်မားသည့် စွမ်းရည်မြင့် အဖွဲ့တခုတွင် အချင်းချင်းကြား နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လေးစားယုံးကြည်မှုရှိခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းများကို ဆက်သွယ် ပေးနိုင်သည့် ဝန်းကျင်ကောင်းတခုရှိနေကြောင်း တွေ့ရသည်။
အရည်းအချင်းရှိ ထူးချွန်သည့်သူများကို ဌါးရမ်းခန့်အပ်ခြင်းဖြင့် လုံလောက်မှုရှိပါ၏လား?
အထက်ပိုင်း စီမံခန့်ခွဲ့‌ရေး တာဝန်များကိုယူထားသည့် (Executives) ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ခေါင်းဆောင်သည့် ပုံစံများထံမှ အများဆုံးကြားရသည်မှာ အကောင်းဆုံး အတော်ဆုံးဆိုသည့် သူများကို ဌါးရမ်းခန့်ခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်ခေါင်းဆောင် နေကြကြောင်းကို ကြားရသည်။ အရည်အချင်းအရ သင့်တော်သည့် သူများကို ဌါးရမ်းခန့် အပ်ခြင်းမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သည့် အဖွဲ့ တခုတည်ဆောက်ရာတွင် အရေးကြီးဆုံး အပိုင်းဖြစ်ပြီး သင့်တော်မှန်ကန်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာကို ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွင် စေ့ဆော်ပေး နိုင်မည်လည်းဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသည့် အဖွဲ့တခုကို စီမံခန့်ခွဲရေးမှာ ရိုးရှင်းမှုမရှိပါ။ ဦးဆောင်သည့် ‌ခေါင်းဆောင်များအနေ ဖြင့်လည်း မိမိဦးဆောင်ရသည့် အဖွဲ့အတွင်း ကောင်းမွန်သည့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုရှိမရှိကို သေချာသိရှိနိုင်နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းရပ်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ရနေခြင်းရှိမရှိကို လက်လှမ်းမှီမှီ ရှိနေရန်အရေးကြီးပါသည်။
ကောင်းမွန်အားကောင်း အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှု အလေ့အထတရပ်ကောင်း ဖန်တီးပေးရန် အဓိကမောင်းနှင်ပေး သည့် အချက် ၆ ချက်ရှိပြီး ယင်းအချက်များ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေပါက အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှု အပေါ်တွင် များစွာ သက်ရောက်မှုကောင်းများ ရှိလာစေပါသည်။
ကလေးငယ်များက ကြာရှည်ကားမောင်းပြီးသွားနေသည့် မိဘများကို မကြာခဏမေးလေ့ရှိသည့် မေးခွန်း များကဲ့သို့ အဖွဲ့တခုကို ခေါင်းဆောင်သည့် ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်လည်း မိမိဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ကို မိမိတို့ဘယ်ကို သွားနေသည်၊သွားရမည် စသည့်မေးခွန်းများကို ဖြေပေးရမည့် တာဝန်များ ရှိပါသည်။ အခြားစကားလုံးတစ်ရပ်မှာ မိမိတို့ဦးတည်သည့် ဦးတည်ချက်နှင့် ယင်းဦးတည်ချက်အောင်မြင်ရန် မည်သည့် လုပ်ငန်းများကိုဦးတည်လုပ်ဆောင်သွားကြမည်ကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ ပုံဖော်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
စာရေးဆရာ Jim Collins မှ Good to Great စာအုပ်တွင် ဦးဆောင်သည့် ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းရပ်များခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် ၃ ခုထက်မပိုသည့် အချက်ကို ချမှတ်ထားရန် အရေးကြီးပြီး မိမိအဖွဲ့အတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းရပ်များသည့် မှုလဦးတည်ထားသည့် ဦးတည်ချက်နှင့် သွေဖည်နေမှုရှိမိရှိ ဦးဆောင်သည့်ခေါင်းဆောင်က ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သည့် အနည်းငယ်သော မှားယွင်းသည့် တွက်ချက်လုပ်ဆောင်နေမှုများက ကြီးမားသည့်လမ်းကြောင်းလွှဲမှားမှုမျိုး ဖြစ်မလာစေရန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ရရှိလာသည့် ရလဒ်များကို ရမှတ်အလိုက် ဖော်ပြထားခြင်း
ရိုးရှင်းသည့် လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များကို မျှဝေဖန်တီးပြီး လုပ်ငန်းဦးတည်ချက် အကောင်အထည်ပေါ်အောင်မြင်ရန် လုပ်ငန်းရပ်အစု အဖွဲ့အသေးစားများကို ပြန်လည်စုဖွဲ့ထားပြီး တိကျရှင်းလင်းသည့် လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့ဝင်များ အားအသိပေးထားခြင်းဖြင့် အောင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုပြင် မိမိတို့အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များအလိုက် ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရသည့် လုပ်ငန်းရပ်အပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင်များကို ပေးထားခြင်းက ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ မှုလ ရည်မှန်းချက်ကိုလည်း အထောက် အကူကောင်း ဖြစ်စေသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် ဦးဆောင်ရသည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတခုရှိပါက လုပ်ငန်းအဖွဲ့အလိုက်ရရှိသည့် ရလဒ်အကောင်အထည်ပေါ် အောင်မြင်မှု ရလဒ် ဖော်ပြချက်အားလုံးကို ဖော်ပြထားပြီး အဖွဲ့များအလိုက် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင် သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်လည်း စုပေါင်းအားကောင်းသည့် အောင်မြင်သည့် ရလဒ် တခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
ရလဒ်တိုင်းတာရေး ဖော်ပြချက်က သင့်ကို ခံစားလွယ်နိုင်စေ
အကယ်၍ သင့်တွင် ကောင်းမွန်သည့်အစီအစဥ်တရပ်ရှိသော်လည်း သင့်အဖွဲ့၏ ဦးတည်ချက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းရပ်များကကို အစဥ်သဖြင့် အမှတ်ရစေရန် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ ထိုကဲ့သို့ စဥ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းလုပ် ဆောင်ခြင်းက ဆိုးရွားသည့် ရလဒ် ဖော်ပြမှု အပေါ်တွင် ခံစားနေရန်မဟုတ်ဘဲ အကောင်းဆုံး ချိတ် ဆက်လုပ်ဆောင်ရန်သာ ဖြစ်နေရမည် ဖြစ်သည်။
မိမိအဖွဲ့အတွင်း အောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှု ရှိစေရန် စည်းမျဥ်းများ ချမှတ်ထားခြင်း
ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အတွင်း အလေ့အထကောင်းများ ချမှတ်ထားခြင်းဖြင့် အဖွဲ့သားအချင်းချင်း ကောင်းမွန် ယဥ်ကျေးမှုတရပ်ကို ဖော်ဆော်ခြင်းများမှာ မိမိအဖွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ တန်ဖိုးလည်းဖြစ်သည်။ အဖွဲ့သားများ အားလုံးကလည်း အဖွဲ့၏ ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းစည်းမျဥ်းကောင်းများလေးစားလိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
မှုများရထိုက်သည့် စသည့် အကြောင်းအရာများအတွက် သင်တော်တည့်မတ်၍ အများသဘောတူလက်ခံနိုင်မည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ချမှတ်ထားသင့်ပါသည်။
ထိုပြင်အဖွဲ့ဝင်များအချင်ချင်းကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပျက်ပြားစေသည့် မည်သည့်အငြင်းပွားမှု မျိုးကိုမဆို ကြားနေစစ်ဆေးပြီး ထိုက်သင့် အပြစ်ဒဏ်များနှင့် သတိပေး မှု လုပ်ငန်းစဥ်များလည်းရှိနေသင့်ပါသည်။